आकस्मिक मन्त्रिपरिषद बैठक बोलाए पाछी बालुवाटार मा मचियो खैला बैला ; आखिर किन ? पुरा पढ्नुहोस - News21Nepal
news21nepal May 2, 2021
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार अपरान्ह ४ बजे बस्नेगरी मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएको सूचना आएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए । उनका अनुसार बैठकका एजेण्डा भने खुलाइएको छैन । ती मन्त्रीका अनुसार नियमित बैठक भएकाले ।
आजको बैठकमा कोरोना महामारी नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारमा केन्द्रीत छलफल र निर्णय हुन सक्नेछ। मन्त्रिपरिषद्को नियमति बैठक सोमबार बस्ने गरेको भएपनि प्रधानमन्त्री ओलीले एक दिनअघि नै बैठक बोलाएका छन् । कोरोना रोकथामका लागि सिसिएमसीले गरेका सिफारिस आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गर्ने छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार अपरान्ह ४ बजे बस्नेगरी मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएको सूचना आएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए । उनका अनुसार बैठकका एजेण्डा भने खुलाइएको छैन । ती मन्त्रीका अनुसार नियमित बैठक भएकाले ।
स्रोत ; रातो पाटि
Tags: आकस्मिक मन्त्रिपरिषद बैठक बोलाए पाछी बालुवाटार मा मचियो खैला बैला ; आखिर किन ? पुरा पढ्नुहोस
Previous भारतलाई पछ्याउँदै नेपाल: एकै दिन थप ५,७६३ जनामा संक्रमण पुष्टि, १९ जनाको मृ’त्यु
Next भारत लाइ तिब्र गति मा पछ्याउदै नेपाल : को’रोना ले गर्यो रेकर्ड ब्रेक : एकै दिन थपिए ७ हजार बढी सं’क्रमित
योजना आयोगको उपाध्यक्षमा पुन कँडेल नियुक्त
May 20, 2021 news21nepal
मौसमविद्ले भने भारी वर्षाको सम्भावना छ
राष्ट्रियसभा उपनिर्वाचनको मतदान शुरु भर्चुअल माध्यमबाट नतिजा
उच्च मनोबल बनाएर कार्यक्षेत्रमा खटिन सुरक्षा निकायलाई निर्देशन
विवेकशील साझाले भन्यो राष्ट्रियसभा उपनिर्वाचनमा नो भोट